Sandals Resorts Inozivisa Mamwe Mahotera Kuvhura Mwedzi Uno
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Resorts » Sandals Resorts Inozivisa Mamwe Mahotera Kuvhura Mwedzi Uno
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kutaridza kuenderera kwesimba kweCaribbean Tourism, Sandals Resorts International yakazivisa kuti yaizounza mamwe mana ekuvhura nzvimbo muna Gumiguru. Kutanga svondo rino, Sandals Grenada neSandals South Coast vanozogamuchira vashanyi musi waGumiguru 1, 2020. Ichitevera tsoka dzevhiki rino, Sandals Royal Plantation ichavhurirwa zviri pamutemo vashanyi musi waGumiguru 8, ichiteverwa neBeaches Turks & Caicos muna Gumiguru. kujoina izvozvi zvakavhurwa: Sandals Grande Antigua, Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean, Sandals Negril, Sandals Grande St. Lucian, and Sandals Regency LaToc, Sandals Royal Barbados, and Sandals Barbados bringing the total to 14 luxury-included resorts open open over the Caribbean .
Kugadzirira kuburitswa, mutungamiri wese weumbozha akapedza mwedzi achiwedzera nhanho-inotungamira matanho ehutano pamwe nekuchengetedza sezvo nhengo dzechikwata kubva kure nekure dzakatanga kudzoka pamwechete kuronga kwakarongeka. Kudzidziswa kwakasimba kwakateverwa kusanganisira kutamba-chikamu ma module uye nekuwedzera zvikamu zvedzidzo kuona kuti zvese zvaive zvisina hunhu kupfuura muyero sezvavakagadzira zvirongwa zvakawanda zvekugamuchira vaenzi kudzoka: mhedzisiro, yakaziviswa zvakanyanya Sandals Platinum Protocol dzeUtsanana.
"Kana paine zvinopesana neizvi, zviri kuona zviso zvemitezo yechikwata uye nemufaro wavo kudzoka kubasa," akadaro Gordon "Butch" Stewart, Sachigaro weSandals Resorts. “Pakutanga kwegore, kufamba kwaive nyore kupfuura nakare kose, uye seindasitiri, taive tichitaura nezvevanhu vanogara. Zvisinei nezvose izvi, takavimbisa kuti kana nguva yekudzoka yasvika, tichadzoka takasimba uye zvirinani kupfuura nakare kose. Isu tinodada nekutungamira nzira yekuve nzvimbo dzekutanga dzekuvhura mhiri kweCaribbean uye nekugona kugovera zvinyorwa zvedu nemamwe mahotera mudunhu iri. Nekuwanda kwemikana iri kuuya, tarisiro yedu inoramba ichikura nekukura kwegore rinouya. ”
MITIMA YEMAITI NEVAGWEDZI VARI #BACKTOHAPPY
"Ini handigoni kuzvikudza nenhengo dzechikwata chedu pasi," akadaro Adam Stewart, Mutevedzeri Wachigaro weSandals Resorts. “Mhinduro yatiri kunzwa kubva kuvashanyi yave inoshamisa, uye vanofara zvikuru kuti vadzoka pakufamba. Iko kuvimba kwavakaratidza, uye rugare rwepfungwa maprotocol edu akavapa kuti vanzwe kuchengetedzeka uye hutano hwakakosha. Nekuda kweizvi, isu takagadzira zvishoma kutaura kuti isu tiri '#BackToHappy.' Kwete chete kuti tinofara kudzoka pachena, tinofara kuita izvo zvatinoda kuita nemazvo, uye izvi zviri kufadza vashanyi vedu. ”